Beauty – Page2– OOTDMYANMAR
6 WAYS TO WEAR CROP TOP + DENIMS FOR SUMMER
No Comments on6WAYS TO WEAR CROP TOP + DENIMS FOR SUMMER
Denim နဲ့ Crop top ကို တွဲဖက်ဝတ်ဆင်နိုင်မယ့် နွေရာသီဖက်ရှင် ၆ မျိုး
There’sareason why denim is one of the few fashion staples that’s always working round-the-clock. They’re timeless, versatile, and not to mention, durable. No matter what the season is, denim remains on top of our list when it comes to wearable fashion pieces that we can rock all-year-long. But if you’re bent on wearing denim because of the hot season, fret not, because we’ve got you covered!
ဖက်ရှင်ချစ်သူတွေ ဂျင်းသား ကို အချိန်အခါမရွေး ရွေးချယ်ကြတာ အကြောင်းအရင်းရှိပါတယ်။ သူတို့က နှစ်ရှည်လများ ဝတ်ဆင်လို့ရတယ်၊ ဘယ်အဝတ်အစားနဲ့မဆို လိုက်ဖက်သလို တာရှည်လည်းခံပါတယ်။ နွေရာသီရဲ့ အပူဒဏ်ကြောင့် ဂျင်းသားတွေဝတ်ဖို့ ဝန်လေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှ စိတ်မပူပါနဲ့။
Below, check out six ways you can style denim during summer minus the sweat and inconvenience.
OOTD ရှိပါတယ်။ ချွေးမထွက်ဘဲ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီး ဂျင်း နဲ့ စတိုင်ထုတ်လို့ရမယ့် outfit ခြောက်မျိုးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
#1 Overalls +black crop top (ကြိုးသိုင်း + အနက်ရောင် crop top)
Photo credits @theingimgmg
#2 Tattered denims + patterned crop top (ဂျင်းအပြဲ + အပွင့်အခက်လေးတွေပါတဲ့ crop top)
Photo credits @_mary_soe
#3 Super micro shorts + white long sleeves crop top (ဂျင်းအတို + အဖြူရောင်လက်ရှည် crop top)
Photo credits @thinzarwintkyaw
#4 Baggy pants + grey crop top (ဘောင်းဘီ အပွအရှည် + မီးခိုးရောင် crop top)
Photo credits @esmeraldakyalphyu
#5 Skirt denims + ribbon crop top (ဂျင်းစကတ် + ribbon crop top)
#6 Denim shorts + White cute off shoulder crop top (ဂျင်းအတို + ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အဖြူရောင် ပခုံးကျ crop top)
Tags denims, Fashion, ootdmyanmar, xenims